कागले एउटै मात्र जीवन साथि किन बनाउछ? - Suvham News
आज काग तिहार । आजको दिन कागलाई पूजा गर्ने र मिठो खानेकुरा ख्वाउने प्रचलन छ । धार्मिक कथन अनुसार कागलाई यमराजको दुत मानिन्छ । त्यसो त कागसँग जोडिएका अनेक रमाइला प्रसंग छन् । कागलाई अन्य धर्ममा पनि भिन्न भिन्नै रुपमा चित्रित गरिन्छ ।
एकातिर हामी कागलाई पूजा गर्छौं भने अर्कोतिर काग कराउनुलाई अशुभ संकेत मान्ने चलन पनि छ । काग, जसलाई हामीले उति महत्व र संरक्षण दिएका छैनौं । हुन त यो पंक्षी अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छैन । न दुर्लभ नै । विश्वको हरेकजसो कुनामा काग पाइन्छ भनिन्छ । वास्तवमा कागलाई पर्यावरणसँग पनि जोडेर हेरिन्छ । यो सर्वभक्षी पंक्षीले पर्यावरण रक्षामा राम्रो भूमिका खेल्ने बताइन्छ । अतः यहाँ कागसँग जोडिएका रोचक तथ्य पेश गरेका छौं ।
करिव चालिस प्रकारको काग पाइन्छ । यिनीहरुको आकारप्रकार भिन्न भिन्नै हुने गर्छ ।
– रेवन एक प्रकारको काग हो, जो सामान्य कागको तुलनामा ठूलो हुन्छ ।
यसको आवाज पनि धेरै कर्कश हुन्छ ।
– अन्टार्टिका बाहेक विश्वको हरेक कुनामा काग पाइन्छ ।
– एक काग करिब १४ बर्षसम्म बाँच्छ ।
– काग अहिलेसम्म पनि ठूलो संख्यामा पाइन्छ । खुसीको कुरा त के भने, अहिले पनि यो विलुप्त हुने खतरामा छैन ।
– काग अलग-अलग धार्मिक कुरा र प्रथासँग जोडिएको छ ।
– कागलाई चालु प्रवृत्तिका भनिन्छ ।
– कागमा बदलाको भावना धेरै लामो समयसम्म रहन्छ ।
– जवान कागले, आफ्नो आमाबुबालाई सानो कागको रेखदेखमा सहयोग गर्छ ।
– यो पंक्षीले अन्य जनवार, मानिसको नक्कल गर्न सक्छ ।
– काग आफ्नो साधरण आवाज बाहेक पनि एक अलग भाषामा कुरा गर्छ । यो भाषा उनीहरुले अक्सर अन्य कागलाई खतराको संकेत दिन पनि प्रयोग गर्छ ।
– कुनैपनि शिकारीसँग जुध्नका लागि कागहरु एकजुट हुने गर्छ ।
– कागको मस्तिष्क मान्छेको मस्तिष्क जस्तै हुन्छ ।
– कागको मस्तिष्क धेरै विकसित हुन्छ । यसको मतलब के भने, काग बुद्धिमान हुनछ ।
– जब एउटा काग मर्छ, अन्य कागले त्यसको आसपासको परीक्षण गर्छ । त्यहाँ कुनै खतरा छ वा छैन भन्नका खातिर कागले त्यसको परीक्षण गर्छन् ।
– कागको वैज्ञानिक नाम कोरवस ब्रैचिरहिन्कोस् हो ।
– मेक्सिकोको बौना जे यस दुनियाँमा पाइने सबैभन्दा सानो प्रजातिको काग हो । यको तौल केवल ४० ग्राम हुन्छ । यसको लम्बाई २१ दशमलव ५ सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुँदैन ।
– काग धेरै पुरानो पंक्षी हो ।
– कागले मान्छेको अनुहार पहिचान गर्न सक्छ ।
– काग सर्वहारी हुन्छ । यसले सबै कुरा खान्छ ।
– जिमी द रेवेन नामको एक प्रशिक्षित कागले सन् १९३४ र १९५४ को बीच एक हजारभन्दा बढी फिचर फिल्ममा भाग लिएको थियो ।
– कागले आफ्नो पुरा जीवनका लागि केवल एक जीवनसाथी बनाउने गर्छ । जन्मिएको दुई बर्षसम्म कागमा यौन परिपक्कता आएको हुँदैन ।
– इजरायलमा केही कागले रोटीको टुक्रालाई चारोको रुपमा माछालाई कसरी ख्वाउने भनेर सिकेका हुन्छन् ।
– प्रशिक्षण विना नै कागका केही प्रजातिले एक उपकरण खोज्न सक्छ, ताकि त्यसले उनीहरुलाई भोजन खोज्नका लागि सहयोग गर्छ ।
– स्विडेनमा कागलाई मृत्त व्यक्तिको आत्मा मानिन्छ ।
Posted in आजको विचार
Tagged आजको विचार, धर्म, बिचार/ब्लग, मन्दिर, सँस्कृति
Prev‘उपभोक्ता ठग्ने होसियार ! तीन लाख जरिवानामा परिएला’
Nextभरतपुरमा २० करोड उठाउने लक्ष्य साथ महायज्ञ